Trump iyo Biden oo yeeshay dood kulul oo fool-ka-fool ah: ” – Ma iga qaban kartaa afkaaga?” – Calanka.com
Trump iyo Biden oo yeeshay dood kulul oo fool-ka-fool ah: ” – Ma iga qaban kartaa afkaaga?”
in Dibedda — by admin —	September 30, 2020
Waxaa dood kulul oo si toos ah telefishanka looga daawaday xalay dhexmartay Cleveland, Ohio madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka, Joe Biden oo iminka ah musharrax u taagan xisbiga Dimiquraadiga.
Labadani nin ayaa ku tartami doona, doorashada madaxtinimada Mareykanka ee lagu wado in ay qabsoonto, saddexda bisha November ee sannadkaan.
Dooddaan oo aheyd tii ugu horreysay ee saddex dood oo Trump iyo Biden ay yeelan doonaan ka hor inta aanan la gaarin doorashada ayaa gadaal dambe isaga baddeshay mud kulul, iyadoonan ay arrintu gaartay in la is aamusiyo.
Arrimo ay ka mid yihiin caafimaadka, amniga, dhaqaalaha ayaa dooddan koowaad diiradda lagu saaray, waxaana si aadka uu musharrax Biden ugu dhaliilay Trump sida uu u maareeyay cudurka COVID19.
Trump ayaa dhankiisa iska difaacay eedeymaha la tacaalidda coronavirus, isaga oona sheegay in uu qabtay shaqo ka wanaagsan tan uu Biden ka qaban lahaa cudurkan haddii uu isaga xilka hayn lahaa.
Biden ayaa dhankiisa yiri ” – Waan ogahay sida shaqo wanaagsan loo qabto”.
Trump ayaa markiiba hadalka ka dafay waxaana uu ku yiri ” – Maxaad shaqo fiican uga qaban weyday markii u dillaacay cudurka “swine flu” ee aad madaxweyne ku xigeenka u aheyd Barack Obama?”.
Biden ayaa ugu jawaabay ” – Markaa 14.000 ayaa dhimatay. Ma aheyn 200.000 oo cudurka coronavirus uu dilay, dhaqaalahana lama dagin sidaada oo kale“.
Doodda marki ay sii kululaatay ayay hadalka kala sugi waayeen labadan musharrax waxaana uu Biden ku yiri Trump “- Ma iga qaban kartaa afkaaga, ninyohow?”.
Labada dhinac oo mararka qaar aflagaaddo iyo hadallo kulul is-dhaafsanayay ayaa Biden oo 77 jir ah ku eedeeyay Trump oo 74 jir ah in uusan cambaareyn cunsuriyadda dadka caddaanka ee aaminsan sarreynta midabka cadaanka isaga oo ugu yeeray “Eyga Putin”..
Wuxuu sida oo kale Biden uu Trump ku tilmaamay: “Madaxweynihi ugu xumaa oo abid soo mara dalka Mareykanka.”
Doodda oo mararka qaar shaqsiyadda qofka ku saabsaney, Mr Trump wuxuu soo bandhigay Mr. Biden wiilkiisa inuu daroogada isticmaalo.
Dhex-dhexaadiyaha doodda Chris Wallace ayaa marwalba kala dhexgalayay Biden iyo Trump, waxaana uu doodda sii xiray marki ay socotay 90-kii daqiiqo ee loogu talo-galay.
Akhriso sidoo kale...
Mufti sunni ah oo dhawaan lagu khaarajiyay Suuriya oo la aasay
Sudan oo aqbashay in cilaaqaad ay la yeelato Israel iyo Mareykanka oo ka saaray liiska argagixisada
Eey midabkiisu cagaar yahay oo ku dhashay dalka Talyaaniga
FBI: " - Iran iyo Ruushka waxa ay faragelin ku hayaan doorashada, waxaana lasoo diray waraaqo hanjab...
October 24, 2020 — 0 comments
Nigeria’s president announced 51 civilians were killed in unrest following days of peaceful protests over police abuses and blamed “hooliganism”[Read More…]
VIDEO: Haweeney lagu amray saxiibkeed in uu xirto maaskada wajiga oo wacdaro dhigtay
VIDEO: Wariyeyaal tabiyay wax ka yaabiyay iyo daawadayaasha oo iyana fajacay
VIDEO: Qaraabada ruux u geeriyooday COVID-19 oo weeraray madaxii isbitaalka
VIDEO: “Mukulaal” waalan oo ka yaabsatay, halisna gelisay nin aalamiinto ku jiray
VIDEO: Daawo waxa ku dhaca ninkan daan-daansanaya dibiga ee ka harsan la`
VIDEO: Gabadha ugu lugaha-dheer adduunka oo gashay buugga taariikhda ee Guinness Records
VIDEO: Daawo waxa uu ninkani ku sameeyo maskan halista ah
VIDEO: Daqsi la wareegay atenshinka dooddii u dhaxeysay Mike Pence iyo Kamala Harris
VIDEO: Nin Australian ah oo feer miirka kaga qaaday haweeney muslim ah oo uu iska sanifay
VIDEO: Daawo geesinimada ninkan iyo waxa ku dhaca marka uu geedka gooyo
VIDEO: Eedeysane maxkamad ka fakaday iyo boolis ceyrsanayay oo dhabarka ka jabay
VIDEO: Darawal ku faanayay quwadda gaarigiisa oo dirqi ku bad-baaday
VIDEO: Daawo waxa ku dhaca haweeneydan khabar-moogga ah ee shaaha iska cabeysa
VIDEO: 25 ruux oo ku dhintay diyaarad ciidan oo ku bur-burtay dalka Ukrain
VIDEO: Kallumeyste baddu qaaday oo lasoo helay maalmo kadib – daawo yaabka uu dhigay
Copyright © 2020 — Calanka.com. CONTACT: webmaster@calanka.com - About Us